Date My Pet » 7 Fahadisoana ratsy Vehivavy hanao izany bato i Izay mety ho vintana fifandraisana
Last nohavaozina: Nov. 23 2020 | 2 min namaky
Tsy misy olona tonga lafatra. Raha ny tena izy, mampiaraka tsy ho tena mahafinaritra raha betsaka ny olona rehetra dia. Na izany aza, misy fomba izay mety hanimba ny mampiaraka traikefa. Ny toro-hevitra eto ambany ireo fahadisoana ratsy tarehy fa ny vehivavy dia tsy tokony hatao rehefa mampiaraka.
Ny hoe Too Available
Manomboha ny ankamaroan'ireo ny fifandraisana ary mamaly avy hatrany misy taratasy avy aminy izay famantarana rehetra milaza koa ianao misy. Ny olona mitady sy matoky mahaleo tena ny vehivavy izay tiany ny olon-kafa. Raha mety manahy na te-haneho fahalianana eo amin'ny lehilahy, loatra misy ho tonga manerana famoizam-po.
Ny olona rehetra te vehivavy mahaleo tena tsara?! Na izany aza, raha toa ianao koa “in-ny” ny tenanao, ny olona ho lasa eny. Zava-dehibe ny mandany fotoana miresaka momba ny daty sy ny zavatra niainany sy ny zavatra mahaliana ary koa ny fizarana ny anao.
Tsy tapaka amin'ny maha Phone
Ianao eo amin'ny daty mba hahafantatra ny hery anaty Mr. Ny tsara sy ny mifamadika amin'izay. Foana ho eo amin'ny telefaonina dia tahaka ny olona tsy mahalala fomba tsy te-mampiaraka ny finday, dia te-hahafantatra ianao. Ataovy azo antoka fa ny telefaonina no tsy ao an-kitapo ny daty manontolo, fa ho azo antoka ihany koa fa ny amin'ny mangina.
Times dia manova sy fanatitra mba handoavana ny daty voalohany dia lasa ny fitakiana. Raha vitsivitsy ny olona dia mikiry amin'ny fandoavana, Maro no ho kivy raha tsy manolotra ny, fara fahakeliny, namaky ny volavolan-dalàna.
Misotro Be Loatra
Raha manana zava-pisotro na roa eo amin'ny daty dia tanteraka tsara, misotro in mihoatra na mamon eo amin'ny daty dia hanana azy mihazakazaka ny ainy. Tsy vitan'ny hoe mampiseho izany fa ianao no tsy vonona ho an'ny fifandraisana lehibe fa matetika misotro be loatra Mitondra mba mety hoe zavatra mety hanenina.
Miezaka Hanova Azy
Betting ny fitiavanao fiainana eto ny mety ny lehilahy dia fomba fahandro ho an'ny loza. Miaraka amin'ny olona fotsiny satria tsara tarehy na manana vola rehefa miezaka ny hanova azy ho lasa lavorary ny lehilahy hiverina ho iray misy fifandraisana feno fahatezerana sy ny lolom-po.
Misy ny olona niova tanteraka eny amin'ny vehivavy izay mamadika ny daty aloha ho any amin'ny vetivety you're-ny-iray-let's-atao-manambady. Tsy misy tsara kokoa dia manana fahatsapana mahafinaritra daty voalohany fa ny vehivavy, mitandrina ny “Tiako ianao” eritreritra ny tenanao ho amin'ny voalohany volana vitsivitsy. Fahazoana lehibe sy maneho fihetseham-po ireo ela loatra no hahatonga ny olona hazakazaka.
5 Lafo Winter Date Hevitra
Dikany ny Mampiaraka sy ny Fifandraisana
6 Fanontaniana mpivady Tokony Diniho Alohan'ny hahazo Pet